Fanadihadiana momba ny zezika organika raw fitaovana
Noho ny zezika simika be dia be napetraka tao anatin'ny fotoana lava be dia mihena ny votoatin'ny zavatra biolojika ao anaty tany raha tsy miandany ny zezika biolojika.
Ny tanjona lehibe indrindra amin'ny odrafitra zezika rganikat dia ny famokarana zezika biolojika izay mampiasa fitaovana isan-karazany misy zavatra biolojika sy azota, phosore ary potasioma amin'ny fitomboan'ny zavamaniry. Alohan'ny hanombohana zavamaniry zezika biolojika dia mila manadihady ny tsenan'ny akora voajanahary eo an-toerana ianao. Manao fanadihadiana momba ny fampahalalana ilaina amin'ny fananganana orinasa, ohatra, ny karazana akora, ny fividianana ary ny fomba fitaterana ary ny vidin'ny fandefasana.
Ny zava-dehibe indrindra hahatratrarana ny famokarana maharitra ny zezika biolojika dia ny fiantohana ny famatsiana maharitra ny akora biolojika. Noho ny toetra mampiavaka ny habetsahan'ny habe sy ny fahasarotana amin'ny fitaterana akora dia tsara kokoa ny manangana ny ozinina zezika anao amin'ny toerana misy famatsiana akora voajanahary, toy ny akaikin'ny fiompiana kisoa lehibe, fiompiana akoho sns.
Ao amin'ny famokarana zezika biolojika dingana, misy fitaovana biolojika marobe, ny mpamokatra mazàna misafidy ireo akora biolojika be indrindra ho lasa akora fototra ary mampiasa akora simika hafa na singa NPK antonony ho toy ny additives, ohatra, ozinina zezika biolojika natsangana akaikin'ny toeram-pambolena iray, ary misy fako fambolena betsaka isan-taona. Ny fanamboarana dia maniry ny hisafidy ny mololo fambolena ho akora fototra ao aminy, sy ny zezika biby, ny tavy ary ny zeolite ho fitaovana.
Raha fintinina, ny akora biolojika, misy zavatra biolojika sy otrikaina izay ilaina hampiroboroboana ny fitomboan'ny voly, dia azo ampiasaina ho akora manta amin'ny fizotry ny famokarana zezika organika. Ny teknolojia famokarana dia azo noforonina arakaraka ny akora samihafa.
Ny safidin'ny ozinina zezika voajanahary
Ny fifantina ny toerana misy ny zezika zezika biolojika dia mifandray akaiky amin'ny vidin'ny famokarana ho avy sy ny fifandraisana amin'ny fitantanana ny famokarana. Ireto misy antony lehibe indrindra tokony hodinihinao.
1. Ny zavamaniry zezika biolojika dia tsy afaka lavitra ny toeram-piompiana. Ny zezika akoho sy zezin-kisoa dia miavaka amin'ny habetsahan'ny habetsaky ny rano, ny atin'ny rano avo ary ny fitaterana manelingelina. Raha lavitra loatra ny toeram-piompiana izy io dia hitombo ny vidin'ny fitaovam-pitaterana.
2. Ny toerana misy ny toeram-piompiana dia tsy azo atao akaiky loatra ary tsy mety amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny tara-pahazavana ambony raha ny fambolena. Raha tsy izany dia mety hamokatra areti-mifindra izy io, ary mahatonga ny fisorohana ny valanaretina aza sarotra ny hamboly.
3. Tokony hanalavitra ny faritra onenana na ny faritra iasana izy io. Amin'ny famokarana na famokarana zezika biolojika dia hamokatra entona malodorosy vitsivitsy izy io. Noho izany, tsara kokoa ny manalavitra ny fiatraikan'ny fiainam-bahoaka.
4. Tokony hipetraka amin'ny toerana misy faritra fisaka izy io, geolojia mafy, latabatra ambany rano ary rivotra tsara. Ankoatr'izay dia tokony hialana amin'ireo toerana mora mirona, tondra-drano na mianjera.
5. Ny tranokala dia tokony ampifanarahana amin'ny fepetra eo an-toerana sy ny fiarovana ny tany. Ampiasao tanteraka ny tany lao na tany karankaina ary aza hipetraka amin'ny tanimboly. Ampiasao araka izay azo atao ny habaka tsy ampiasaina tany am-boalohany, ary avy eo azonao atao ny mampihena ny fampiasam-bola.
6. Ny zavamaniry zezika biolojika dia tsara kokoa mahitsizoro. Tokony ho 10 000-20000 eo ho eo ny velaran'ny orinasa.
7. Ny tranokala dia tsy afaka ny ho lavitra loatra ny tariby mandeha amin'ny herinaratra mba hampihenana ny fanjifana herinaratra sy ny fampiasam-bola amin'ny rafitra famatsiana herinaratra. Tokony ho eo akaikin'ny famatsian-drano izy io hahafahana mamaly ny filan'ny rano amin'ny famokarana sy ny fiainana.